थाईल्याण्ड को दक्षिण मा फुकेत द्वीप, यसको क्षेत्र सिंगापुर नजिक छ। यसको नाम मलाया अर्थ "पर्वत" छ। र साँच्चै, यो समुद्र देखि बढ्दो हिल धेरै समान छ। फुकेत एक राजमार्ग प्रबन्ध छ जो एक सेतु, द्वारा मुख्य भूमि जोडिएको छ। द्वीप आफ्नो विमानस्थल छ।
वर्षाको, अक्टोबर र तातो मई देखि चल्छ जो - त्यहाँ दुई मौसम हो। म भिजेको मौसम, घाम दिन मा एक वर्ष भए तापनि द्वीप धेरै भन्न पर्छ। र वर्षा, कुनै थप दुई वा तीन घण्टा भन्दा पछिल्लो तिनीहरूले भने। सबैभन्दा "भिजेको" फुकेत मा महिना सेप्टेम्बर हुन मानिन्छ। उच्च सिजन नोभेम्बर मा सुरु र फरवरी को अन्त सम्म रहन्छ। यस समयमा, तापमान तीस डिग्री गर्न rises।
टापुमा धेरै लोकप्रिय डाइभिङ छ। यो भन्ने तथ्यलाई द्वारा बताए छ अंडमान सागर समुद्र को आफ्नो अद्भुत सुन्दरता संग, कोरल reefs र गुफाहरु पानी अन्तर्गत swimmers लागि सिर्फ एक स्वतन्त्रता हो। यो रिसोर्ट धेरै विशेष विद्यालय, एक गोता आयोजना। साथै, फुकेत मा पर्यटकहरु को निपटान मा चालक दल संग एक डुङ्गा लेना महंगा हुन सक्छ यी क्षेत्रमा एक रोमाञ्चक माछा मार्ने लागि सुसज्जित धेरै डुङ्गा छन्।
सेतो तटों द्वारा फ्रेम र अंडमान सागर को न्यानो पानी द्वारा lapped थाईल्याण्ड को दक्षिण-पूर्व, एक वास्तविक ट्रपिकल स्वर्ग छ। यसलाई यहाँ रिसोर्ट मा कि सबै भन्दा राम्रो स्थित होटल छ।
पूर्ण संरक्षित प्राकृतिक वातावरण, धेरै विशेष र महंगा अपार्टमेन्ट बाट बजेट समुद्र तट bungalows गर्न लिएर होटल को एक विस्तृत विविधता, फुकेत लोकप्रिय छुट्टी गन्तव्यहरू एक गरे। पर्यटक विशाल संख्या आकर्षित गर्न एक वर्ष देखि यी सबै लाभ - आश्चर्यजनक सुन्दर प्राकृतिक परिदृश्य रसीला ट्रपिकल वनस्पति, पहाड, शानदार चट्टानी coves र सेतो बालुवा समुद्र तट, नीला समुद्र शुद्धता ढाकिएका को मुख्य भूमि संग उत्कृष्ट परिवहन लिंक संग संयुक्त।
सामान्य र विशेष थाईल्याण्ड फुकेत तपाईं पर्स को कुनै पनि सामग्री संग आराम महसुस गर्न सक्छन् जहाँ रिसोर्ट्स, हुन्। उदाहरणका लागि, तपाईं प्रति दिन 400 भाट लागि द्वीप को भित्री मा अतिथि गृह र होटल मा डबल कोठा हटाउन सक्नुहुन्छ। खाद्य, को पाठ्यक्रम, रेस्टुरेन्ट मा प्रेरणादायक व्यञ्जन "मुद्रा" लागत लागि बाहेक, राम्रो, रात मनोरञ्जन कुनै पनि अन्य युरोपेली शहर भन्दा धेरै सस्ता। फुकेत मूल्यहरु अन्य थाई रिसोर्ट्स भन्दा अलिकति उच्च हो तापनि यहाँ सम्भव आर्थिक पर्याप्त आराम छ। यात्रा लागत को मुख्य घटक टिकटको को लागत छ। उदाहरणका लागि, सात सय डलर राउन्ड यात्राको मास्को लागत उडान गैर-रोक्न। र तपाईं टिकट मा सुरक्षित यदि समस्याग्रस्त त्यसपछि रहन छ, - यो पनि सम्भव छ। होटल मा मूल्यहरु धेरै वैविध्यपूर्ण हो: तपाईं 400 भाट एक दिन (हुनत यो समुद्र तट टाढा स्थित गरिनेछ) को लागि डबल कोठा भाडामा सक्छ, र एक dizzying लक्जरी अपार्टमेन्ट (द्वीप को सबै भन्दा महंगा होटल मा) दस हजार डलर खर्च हुनेछ भनेर भाडामा गर्न सक्नुहुन्छ। रहन कुल फुकेत हजार बारेमा स्थानहरू। यो होटल र गेस्ट हाउस, र सबै स्वाद लागि Resort - महंगा लक्जरी सुइट्स र तीन-तारे बजेट दुवै, उदाहरणका लागि, काटयो Garden Resort3*। नक्सामा यो होटल काटयो, को तट देखि दुई सय मीटर को प्रसिद्ध समुद्र तट मा स्थित छ स्पष्ट छ।
काटयो Garden Resort3* एउटा सानो होटल छ। उहाँले एउटा सुन्दर राम्रो-राखिएको क्षेत्र, पूर्ण जंगल जोडतोडले छ। स्थान राम्रो चुनिएको: बस पाँच मिनेट पैदल ठूलो सुपरमार्केट, सात सय मीटर छ - स्थानीय बजार। पहिले काटयो बीच मिनेट को एक जोडी भित्र पुग्न सकिन्छ। सडक को धेरै stalls विगतका जान्छ। प्रसिद्ध बजार caron लगभग दुई किलोमिटर। उहाँले एक पैदल लाग्न सक्छ अघि, र यो सार्वजनिक परिवहन, सीधा होटल अगाडि प्रबन्ध छोड्नुहुन्न जो प्रयोग गर्न सम्भव छ। नजिकैको पनि एक मिनी गोल्फ क्लब हो। फुकेत केन्द्र सत्र किलोमिटर गर्न। विमानस्थलमा चालीस मिनेट ड्राइभ बारेमा छ।
काटयो Garden Resort3* (फुकेत) - को bungalows प्रामाणिक थाई शैलीमा निर्मित छन् जहाँ केही होटल को एक। यो आगंतुकों थाईल्याण्ड को वातावरण महसुस गर्न अनुमति दिन्छ। बीस अधिक वर्ष को लागि, यो होटल उनीहरूलाई एउटा अविस्मरणीय छुट्टी दिने र सेवाहरूको दायरा लागि आवश्यक सबै सुविधा प्रदान, यात्री स्वागत गरिएको छ। इलाका काटयो Garden Resort3* एउटा रसीला बगैचा छ। कोठा च्याट पाहुनाहरूलाई विशाल नरिवल Palms को rustling पात सुन्ने, समुद्रको परिदृश्य पराउँछु गर्न सक्नुहुन्छ। इलाका सुरक्षित छ।
होटल सम्रचना घडी राउन्ड एक स्वागत क्षेत्र समावेश छ। को सेवाहरू उपलब्ध जीवित लाँड्री र चिकित्सा कार्यालय भुक्तानी। को नियम अनुसार, यो होटल मा पुस्तिका कुकुर सहित पाल्तु जनावर संग आबादी गर्न सकिँदैन। आगमन चौध घण्टा को लागि निर्धारित छ, र जाँच - दिउँसो, तर यो एउटा inopportune समयमा बाहिर दिइएको थिए पर्यटक संख्या साँचाहरू गर्न अवरोध छैन।
रिसेप्शन कर्मचारी एक ट्याक्सी कल वा विमानस्थल शटल व्यवस्था गर्न मद्दत गर्नेछ। भ्रमण डेस्क पनि छ। काटयो Garden Resort3* होटल मा honeymooners र जन्मदिन लागि सहित केही compliments छ।
आधुनिक स्तर अनुसार, होटल सानो मानिन्छ। सबै सबै यो साठी कोठा मा, बंगला द्वारा staffed। कोठा को पाहुनाहरूलाई काटयो Garden Resort3* (फुकेत, काटयो) विशेष गरी प्रभावशाली expanse, थाई शैलीमा ठूलो स्वाद संग सजाया। कोठा को निम्न विभाग: "मानक", "डिलक्स", उच्च ट्रिपल र मिनी सुइट कक्ष। तिनीहरू सबै जीवित लागि सहज सामान संग सुसज्जित र अत्यावश्यक सेवा पूर्ण सेट छ छन्।
कोठा, त्यसको आधारमा श्रेणी मा बीस-दुई देखि तीस वर्ग मीटर लिएर। सबै भन्दा ठूलो अपार्टमेन्ट प्रिमियर वर्ग हो जो2एकाइहरु मा
प्रत्येक कोठा बरतन र तातो चिया वा कफी को तयारी को लागि सबै आवश्यक सामान संग सुसज्जित छ। सेवा - घडी राउन्ड सेवा। उच्च कोठा निःशुल्क सुरक्षित छ। नयाँ फर्नीचर: एक डेस्क र सामान रैक को एक वातावरण, साथै मा एक दराज र कुर्सियों संग तालिका। अपार्टमेंट मा जीवित कोठा मा एक सोफा र कुर्सी छ।
होटल काटयो Garden Resort3* "कन्टिनेन्टल नास्ता" को अवधारणा प्रस्तावित। नाश्ता बुफे कुन दिन र रात आरक्षण द्वारा स्वागत अतिथि मुख्य रेस्टुरेन्ट, सेवा छ। समीक्षा द्वारा न्याय, को पर्यटकहरूले महाराज द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रिय र युरोपेली भोजन आनन्द। होटल भान्सा को अपूर्ण भर्ने संग व्यक्तिगत रूपमा तयार, र केवल खाना को उच्च सिजन एक "बुफे" मा प्रस्ताव मा।
काटयो Garden Resort को क्षेत्र मा पनि क्याफे र एक पल्ट छ। इच्छित भने, निवासी नजिकैको सस्तो रेस्टुरेन्टमा एक मा भोजन गर्न सक्छन्, तर पनि तपाईं संग तयार ताजा समुद्री खाना बजार प्रयास गर्नुहोस्।
काटयो Garden Resort3को * बलौटे समुद्र तट देखि केहि कदम निर्माण गरिएको छ। रजिस्ट्री तौलिया लाग्न सक्छ मा, एक जम्मा छोड्नुहोस्। पर्यटकहरु sunbeds र छाते लागि अतिरिक्त तिर्न आवश्यक छैन। पानी खोक्रो मा एक शान्त प्रवेश: तट Andamandskogo समुद्र साना बच्चाहरु आराम लागि आदर्श छ। दुवै समुद्र तट - काटयो र Karon - पैदल दूरी हो।
होटल त्यहाँ पूल को लागि एक ठाउँ थियो जहाँ एउटा सानो र पूर्ण हरियो क्षेत्र, छ। को बेड, गद्दे र छाते वरिपरि राख्नुभयो। त्यहाँ उच्च गुणस्तरीय एनिमेसन छन्। ती रुचि सना र मालिश सेवा (अतिरिक्त शुल्क) भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, साथै आत्म-अध्ययन छिमेक लागि बाइक वा minibike भाडामा।
कार्यालय मा, होटल मा तपाईं पर्यटन caron को मन्दिर गर्न, बुद्ध गर्न डाँडामा "शान्ति बाघ", तपाईं पनि त मा Similan द्वीप मा यी शिकारीहरु को calves pet, र गर्न सक्छन् जहाँ मा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। डी
को काटयो Garden Resort3* सानो मनोरञ्जन भने समुद्र तट मा - विपरीत। इच्छित भने, तपाईं एक अनुभवी प्रशिक्षक संग एक catamaran वा स्कूटर, भाडा उपकरण डाइभिङ लागि भाडामा र पानी सौन्दर्य पराउँछु गर्न सक्नुहुन्छ। को साँझमा तपाईं रेस्टुरेन्ट काटयो Garden Resort3* मा खेल्छ जो संगीत, प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुन्छ।
यस होटल भ्रमण गरेका धेरै रूस, यो यसको श्रेणी लागि धेरै राम्रो छ भनेर पत्ता लगाउन। पर्यटकहरुका लागि सबै आवश्यक पूर्वाधार छ नजिक: यो एक सुविधाजनक स्थान छ। कर्मचारी काटयो Garden Resort3* भद्र र सधैं हँसिलो।
यो विशाल कोठा को जीर्णोद्धार गर्दै छन्, सेनेटरी गुणस्तर, कालो-बाहिर पर्दे। शक्ति, हाम्रा सँगी नागरिक, राम्रो, को स्वादिष्ट फल लागि उत्साह को विशेष गरी धेरै को बहुमत अनुसार। रूस को बेफाइदा बीच सडकको निकटता मनाउन: केही कोठा यातायात देखि पटक मा हल्ला हस्तक्षेप।
छोटो मा, थाईल्याण्ड चयन गर्ने ती, यो होटल राम्रो छ। धेरै पर्यटकहरु अनुसार, यो बजेट यात्री लागि एक महान विकल्प छ।
Ölüdeniz, टर्की होटल। कैरेक्टराइजेशन समीक्षा
5 Sonesta बीच होटल (Sharm एल शेख / मिश्र)
प्रभावशाली संसारमा होटल "अस्थायी"
कसरी आफैलाई स्पाइक बुनाई गर्न?
बिरालो - यो सिर्फ एक पाल्तु जनावर छ
आधारभूत र फ्रिडाइभिङ उपकरण। फ्रिडाइभिङ - यो के हो?
एक बुना पोशाक सी। दुई तरिकामा
देवी Hecate - ग्रीक पौराणिक कथाहरु मा अन्धकारको देवी
महिला मुटु आक्रमणको लक्षण। एक हृदय आक्रमण समयमा के गर्नुपर्छ?
केसिया याकूबोस्काया: जीवनी, करियर, व्यक्तिगत जीवन